Toamasina : nanadio ny moron-dranomasina ny vahoaka | NewsMada
Toamasina : nanadio ny moron-dranomasina ny vahoaka
Nandray andraikitra sy nanetry tena ny mponina ao Toamasina niaraka amin’ny fikambanana roa sy ny mpitandro filaminana nanadio ny moron-dranomasina.
Nitaona ny vahoakan’ i Toamasina hifanome tanana hiaraka aminy handray andraikitra hanadio ny moron-dranomasina ny vondron’ny tambajotran-tserasera, Ino Maresaka Toamasina ( IMT), ny 29 marsa lasa teo. Namaly ny antso ny ankamaroan’ny fikambanana sosialy, politika (Tim, HVM) ary ny polisim-pirenena sy ny vadin’ny polisy. Nanala ny fako mivagongo etsy Ambodimanga kosa ny zandary ny faran’ny volana lasa teo. Noho ny Andron’ny zandarimariam-pirenena, nanome ra an-tsitrapo koa izy ireo.
Andaniny, nitondra ny anjara birikiny koa ny fikambanana Fivoy tamin’ny alalan’ny filohany, ny minisitry ny Tontolo iainana, Ndahimananjara Johanita. Nanome sarom-bava sy aron-tanana ary kamiao lehibe nahafahana nitatitra ireo fako voaangona ny tenany. Tsy niditra an-tsehatra mihitsy ny kaominina tamin’ ity hetsika fanadiovana tanàna ity.
Nanamarika ny jeneraly kaomandim-paritanin’ny zandarimam-pirenena, Serge Gellée, nandritra ny kabariny fa hanaisotra ny fako izy ireo fa mety tsy ho vitany daholo ny hanala izany izay efa niavosa be. Teny natsipy ho an’ny ben’ny Tanànan’ i Toamasina izany.
Afa-po noho ny hetsika fanadiovana ny filoha mpanatanteraky ny IMT, Yvan Fabius, sy ny filoha mpanorina, Ndihamahazo Mickaelys. Nitondra ny fakobe teny amoron-dranomasina ny ny rivodoza Enawo farany teo.